I-Bekhterev Institute yikhungo sezokwelapha esiye senziwa ocwaningweni lwezokwelapha kanye nesayensi iminyaka eminingi . Lesi sikhungo sombuso sigxile emkhakheni we-psychotherapy, i-neurology, i-psychiatry, i-narcology, i-psychodiagnostics, i-gerontopsychiatry ne-neurosurgery. Ukubambisana kwalesi sikhungo sezokwelapha kubandakanya, ikakhulukazi, ochwepheshe abaqeqeshiwe kakhulu - abazobhapathizwa bezesayensi nodokotela.
Institute Psychoneurological. U-Bechterew wadalwa yi-Academician, owaziwayo wezifo zengqondo waseRussia ovelele, umsunguli weziqondiso ze-pathopsychological and reflexology eRussia - u-Vladimir Mikhailovich Bekhterev. Nguye owayilungisa ngo-1907 njengocwaningo kanye nesikhungo esiphakeme semfundo. Isikhungo seBekhterev seminyaka eminingi sasiyisikhungo kuphela ensimini yaseRussia lapho umsebenzi wokutholwa komzimba kanye nokufundisa wawuhlangene ngempumelelo. UVladimir Mihajlovich ucatshangwa kahle, ukuthi umsebenzi ozayo osebenzayo kanye nesayensi kwanoma yimuphi udokotela kuyadingeka ukuthi angayitholi kuphela imithi yokwelapha, kodwa futhi nemfundo yezomthetho nefilosofi.
Isigaba sokuqala empilweni ye-Institute
Ngo-1911, i-Bekhterev Institute yaseSt. Petersburg okokuqala ngqangi emisebenzini yezokwelapha yaseRussia yahlela futhi yenza izifundo okuthiwa ziphindaphinda izintshisekelo emkhakheni we-neuropathology and psychiatry. Izifundo ezitholakalayo zakamuva kanye nempumelelo ezithinta lezi zimboni zazifundwa ngabahlengikazi abahola phambili amasonto ayisithupha. Odokotela abangamashumi amabili nanhlanu baqeqeshwe kulezi zifundo eziphakeme zokuqeqesha emlandweni wemithi yaseRussia. Ngaphezu kwalokho, izinhlelo zokuqeqesha zalolu hlobo zodokotela bezinye izinto ezikhethekile zalungiswa. Ngeshwa, impi eyaqala ngo-1914 ayizange ivumele uVladimir Mikhailovich ukuba asebenzise le phrojekthi.
Isigaba sesibili empilweni ye-Institute
Ngo-1919 i-Bekhterev Institute yahlelwa kabusha. Amandla afundiswe emfundo, ngokuhambisana nomyalelo ohambelana nawo, ashintshelwe ezikhungo eziphakeme kakhulu zemfundo, njengesibonelo, iSt. Petersburg Chemical and Pharmaceutical Academy, futhi waba yingxenye yeminyango eminingana ye-Faculty of Psychology yaseYunivesithi. Kwakuyi-Bekhterev Institute e-USSR yangaphambili eyaba yikhungo sokuqala eyenziwa imisebenzi yokuthuthukiswa kwengqondo ye-psychotherapy kanye nokuvuselelwa kwengqondo kwengqondo eRussia. Kusukela ngo-1993, lesi sikhungo sezokwelapha yisisekelo se-World Health Organization emkhakheni wocwaningo lwesayensi, ukuqeqeshwa kwabasebenzi abaqeqeshiwe kanye nenhlangano yokunakekelwa kwengqondo kwengqondo. Ngonyaka ka-2001, njengesizotha emlandweni wamasiko, i-Institute yavuselela iSikole Sokuqeqesha, esisebenza namuhla ngemisebenzi yezemfundo ye-Institute futhi iyisikhungo esihamba phambili ezweni.
U-Natalia Bekhtereva ne-Institute of the Brain
Ekhuluma ngoVladimir Mikhailovich Bekhterev kanye nendalo yakhe eyinhloko, akunakwenzeka ukukhuluma ngoBekhterev Natalia Petrovna - umzukulu we-famous academician. Wahamba ngezinyathelo zakhe futhi ngo-1947 waphumelela esikhungweni sezokwelapha saseLeningrad . U-Natalia Petrovna wayenesithakazelo kakhulu emisebenzini kaBekhterev futhi yena ngokwakhe wabhala okuningi kunencwadi eyodwa. Ngo-1992, wamiswa njengenhloko yeqembu lesayensi le-neurophysiology yokuqonda, ukuklama nokucabanga kwe-Institute of the Human Brain yeSikhungo SaseRussia Sciences, ngaleyo ndlela, ngaleyo ndlela yayibizwa ngokuthi i-Bekhtereva Institute. Ngaphezu kwalokho, uNatalika Petrovna wasebenza isikhathi eside e-Research University of Experimental Medicine. Uma sikhuluma ngomnikelo oyinhloko umzukulu we-academician owaziwayo oshiya emkhakheni wezokwelapha, lokhu kuyisayensi yesayensi emkhakheni wezobuchopho bomuntu. Kwakuyisikhathi sakhe esakhiwe nguNatalia Bekhtereva. I-Institute of the Brain - isayithi lomsebenzi wakhe wokugcina - isize kakhulu futhi yasiza ukubeka isisekelo socwaningo oluyisisekelo esizayo.
I-Bekhterev Institute namuhla
Njengamanje, Isikhungo Sokuqeqesha sihlela ukuqeqeshwa ezintweni eziyisihlanu eziyinhloko. Lona yi-neurology, i-psychiatry, i-psychotherapy, i-psychological clinic kanye ne-psychiatry-narcology. Ngesikhathi esifanayo, zonke izimo ezidingekayo zenziwe ukuqhubekela phambili kwemfundo yezochwepheshe ngezingcweti zesikhathi esizayo ngenxa yokuqaliswa okwenziwa ngesikhathi esisodwa kwezinhlelo eziyisisekelo nezihlukahlukene zokufundisa ezengeziwe. Futhi, bonke abaqhamukayo banikezwa ithuba lokufunda ama- curricula amaningana ngesikhathi esisodwa . Ngaphezu kwalokho, ukuqeqeshwa kuyatholakala ohlelweni lomuntu ngamunye. I-Institute inikeza abafundi ithuba lokubamba iqhaza emisebenzini, futhi bahambele izingqungquthela ezihlukahlukene zesifunda nezamanye amazwe zesayensi nezisebenzayo, izikole kanye nezinkomfa.
Izinhlelo zochwepheshe ze-Institute
Izinhlelo eziyinhloko zezemfundo ezifundiswa yi-Institute namuhla zifundiswa iziqu zokufunda, ukuhlala nokuqeqeshwa. Ngaphezu kwalokho, kungekudala ukuphathwa kwalesi sikhungo kuhlela ukuqala imantshi.
Esikhundleni sezinhlelo ezengeziwe zezobuchwepheshe kukhona izinhlelo zokuthuthukiswa okuqakathekileko, ukuqeqeshwa okuthuthukisiwe kanye nokuqashwa kabusha kochwepheshe. Ekuthuthukiseni kwabo bonke bavunyelwe abantu abathola kuphela noma abavele benemfundo ephakeme yezemfundo. Ngaphezu kwalokho, ngokuphelele izinhlelo zonke zihlanganisa ukuqeqeshwa kwemitholampilo nokufundiswa, ukuqeqeshwa kokuqondisa kanye namakhono akhethekile.
Uma sikhuluma ngokuqondene nokuqeqeshwa esikhungweni se-Bekhterev, okokuqala kufanele kube khona ukuthi kufanele kubhekiswe ukunakwa okuningi emsebenzini wezemfundo ngenkathi kuqeqeshwa ochwepheshe. Lezi zinsuku zihlose ukwandisa ukukhishwa kwemvelo, ukwakha izinga eliphezulu elingokomoya, ukunamathela emasikweni alokhu isikhungo sobuchwepheshe, kanye nokwethulwa kwamagugu amasiko kazwelonke. Kwabafundi abaphothule iziqu, izakhamuzi kanye nabafundi, izinhlelo zokufundisa ezikhethekile zigcinwe emnyuziyamu we-Institute, kanye nokuvakashelwa okusemthethweni emhlanganweni wesigodi ngaphakathi kwezindonga zeMashimashi yaseRussia.
Lapho sekuqedile inqubo yokufunda, umfundi ngamunye uthola idokhumende esemthethweni evunyelwe uMnyango Wezempilo kanye noMnyango WezeMfundo. Ikakhulukazi kufanele kuqashelwe ukuthi njengamanje umsebenzi wezemfundo walesi sikhungo awukona nje ukuhweba, kodwa futhi ngesisekelo sesabelomali.
Kukhona lesi sikhungo semfundo endlini yenombolo yesithathu emgwaqweni Bekhterev. I-Institute (ikheli alishintshile isikhathi eside kakhulu) lithatha isakhiwo esikhulu esinezitezi ezintathu. Namuhla, nansi ukuphathwa kwezikole lezemfundo ephakeme, umnyango weluleki, i-laboratory ye-psychodiagnostic kanye neyayokwelashwa kwengqondo, umnyango wesifo sengqondo somphakathi kanye nengqondo yengqondo yengane, umnyango we-physiotherapy, kanye nomnyango wezinkinga zokugula ngengqondo. Ngaphezu kwalokho, kuleli kheli yisikhungo sokuqeqesha, umtholampilo wezinzwa, isikhungo sezifundo zokuxilonga nokuningi okuningi.